सावधान !! तीन घन्टाभन्दा बढी टीभी हेर्ने बालबालिकालाई मधुमेहको सम्भावना - IAUA
सावधान !! तीन घन्टाभन्दा बढी टीभी हेर्ने बालबालिकालाई मधुमेहको सम्भावना
ramkrishna October 22, 2017	सावधान !! तीन घन्टाभन्दा बढी टीभी हेर्ने बालबालिकालाई मधुमेहको सम्भावना
दिनहुँ तीन घन्टाभन्दा बढी समय टीभी, कम्प्युटर, टयाबलेट, स्मार्ट फोन आदिमा बिताउने बालबालिकालाई मधुमेहसमेत हुन सक्छ । यसरी निरन्तर स्क्रिनमा दिनहुँ समय खर्चिनु उनीहरूको स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन ।
यो अध्ययन आर्काइभ्ज अफ डिजिज इन चाइल्डहुडमा प्रकाशित छ । मेटाबोलिक र कार्डियोभास्कुलरसम्बन्धी परीक्षणको लागि यो अध्ययन बेलायती सहर बर्मिंघम र लिसेस्टरका ९–१२ वर्ष उमेर समूहका साढे चार हजार बालबालिकामा गरिएको हो । ती बालबालिका दुई सय प्राथमिक स्कुलबाट छानिएका थिए ।
अध्ययन अनुसार, डिजिटल माध्यमप्रति बालबालिकाको निरन्तर लगाव उनीहरूमा मोटोपनको कारक हुन सक्छ । यस्तो बानी ‘इन्सुलिन रेजिस्टेन्स’ का लागि जिम्मेवारसमेत हुन सक्छ ।
इन्सुलिनले पाचनग्रन्थीका माध्यमले हार्मोनबाट ब्लड ग्लुकोजको स्तर बढ्नबाट रोक्छ । इन्सुलिनको यो काममा मधुमेहले बाधा उत्पन्न गर्छ ।
बाल्यकालको प्रारम्भिक वर्षमा टीभी स्क्रिनमा कम समय बिताउने बालबालिकामा टाइप–२ मधुमेह हुने जोखिम कम हुन्छ ।
धेरै टिभी हेर्ने बानि छ यदि छ भने छोड्नुहोस् धेरै टिभी हेर्नुका बेफाइदाहरु यस्ता छन् !
विभिन्न अनुसन्धानले बढी टिभी हेर्ने मानिसलाई मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुने देखाएका छन् ।
लामो समयसम्म टिभी हेर्नाले अथवा कम्प्युटर चलाउनाले अनिद्राको समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
यस्ता मानिसमा ब्रेन हारमोन मेलाटोनिनको मात्रा बढी हुन्छ, जसकारण चिन्ता बढ्ने, ढिलो निदाउने र छिटो बिउँझिनेजस्ता समस्या उत्पन्न हुन्छन् ।
१. डायबिटिजका बिरामीले बढी टिभी हेरेमा उनीहरूको शरीरमा चिनीको मात्रा अझ बढ्न पुग्छ । टिभी हेर्न बस्दा मानिसले तुलनात्मक रूपमा बढी खाने गर्छ । यसले पनि सुगरको मात्रा बढाउने काम गर्छ ।
२. लामो समयसम्म टिभी हेर्ने मानिस बढी मोटाउँछ । टिभी हेर्दा मानिसको शरीर निष्क्रिय हुन्छ । लामो समयसम्म निष्क्रिय भएर बसेमा शरीरमा बोसोको मात्रा बढ्न पुग्छ र मानिस मोटाउँछ ।
३. बढी टिभी हेर्नेहरूको स्मरण शक्ति पनि कमजोर हुन्छ । टिभीमा देखिने इमेज र यसबाट आउने साउन्डले मानिसको न्युरोलोजिकल सिस्टममा असर गर्छ । यसैकारण बढी टिभी हेर्ने बालबालिकाको स्मरण शक्ति कम हुने गरेको विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ ।
४. बढी टिभी हेर्ने बालबालिकालाई परिपक्व हुन तुलनात्मक रूपमा बढी समय लाग्छ । उनीहरू टिभीमा देखिने काल्पनिक संसारमा बढी रमाउने गर्छन् ।
५. लामो समयसम्म टिभी हेर्ने मानिस बढी सन्काहा हुने गर्छन् । लगातार टिभी हेर्ने बालबालिकाले सन्काहा व्यवहार बढी देखाउने गरेको विभिन्न अध्ययनका क्रममा फेला परेको gulfact
Previous Previous post: छारे रोगका बारेमा जान्नैपर्ने कुराहरु
Next Next post: कत्रा कत्रा तरकारी !